SEGEP မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမောင်မောင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / SEGEP မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမောင်မောင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
SEGEP မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမောင်မောင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ December 27, 2016 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 537 Views
ရေးမြို့နယ်တွင် အရှေ့တောင်အထွေထွေစွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီလီမီတက် (SEGEP) မှ မကြာမီတွင် လျပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ သိရှိနားလည်စေရန် ကုမ္မဏီတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ သတင်းထောက် ပိုင်နွန် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ကို ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ပိုင်နွန် ။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီအကြောင်းနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပါအုန်းရှင့်
မောင်မောင်မြင့် ။ ။ ဆရာတို့ကုမ္ပဏီက အထူးသဖြင့် မွန်ပြည်နယ်မှာ အစိုးရလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရသေးတဲ့နေရာတွေမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ရယ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်တာ (၃) နေရာ ရေး၊ သံဖြူဇရပ်၊ ကျိုက်မရော၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး၊ ရေးမှာ ရေးသန့်လည်း ဖြန့်ဖြူးမယ်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလည်း တွဲလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်၊ လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကို လုပ်ပေးတယ်၊ ရေလုပ်ငန်းအခြေပြုစက်မှုဇုံ လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။
SEGEP မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမောင်မောင်မြင့်(MNA)
ပိုင်နွန်။ ။ အခုလို အကောင်ထည်ဖော် လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရော အခြားနိုင်ငံတို့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိလား?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ ဆရာတို့ SEGEP ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားတွေပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ၊ ဆရာတို့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့စွမ်းအားနဲ့ ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အရင်းအနှီးနဲ့ စတင်လည်ပတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ နည်းပညာပိုင်းမှာ နည်းပညာအထောက်အပံ့လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်၊ ဥပမာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းက Fuel Oil- FO လောင်စာနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ ဆရာတို့တာဝန်ခံနဲ့ နိုင်ငံခြား (partner) တွဲဖက် ရှိတယ်၊ ဒီအတိုင်းပဲ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ရေအားလျှပ်စစ်ကို ဝိုင်းကူပြီးတော့မှ ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ (partner ) တွေရှိရတယ်၊ ဒါကြောင့် ဆရာတို့မှာ နိုင်ငံခြားနဲ့ရင်းနှီးရတယ် ကန့်သတ်ချက်ရှိရတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှာက ငွေချေးလို့ရတယ် နည်းပညာတွေ ယူလို့ရတယ်၊ အဲ့လိုပူးပေါင်းတာတော့ရှိတယ်၊ ဒါမဲ့ ဆရာတို့လုပ်တဲ့ SEGEP လုပ်ငန်းကို မပိုင်ဘူးပေါ့၊ သူတို့ဘက်က အကျိုးခံစားခွင့်က ပိုက်ဆံချေးပေးထားရင် အတိုးရတယ် အဲ့လိုပဲပါ။
ပိုင်နွန်။ ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက် အစိုးရကနေ ဘယ်လိုသဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သလဲ? ဘယ်တုန်းကလဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ ဆရာတို့လုပ်ငန်းသဘောက ဆရာတို့အရင်းနှီးနဲ့ ဒီဒေသမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုလာလုပ်တယ်၊ အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ခွင့်ပြုချက်ပဲ ပေးရတယ်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဘာမှ မပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရက ခွင့်ပြုချက်ပေးတယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုလည်း သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းတယ်၊ ဆရာတို့က သဘောထားမှတ်ချက်ပဲ တောင်းတယ်၊ လွှတ်တော်ရဲ့ သဘောတူညီချက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ လွှတ်တော်ကနေ မူအားဖြင့် သဘောတူတယ်၊ အစိုးရစီက ခွင့်ပြုချက်ရှိလို့ ဒီပြည်နယ်လျှပ်စစ်တွေကို သူတို့ချပေးတာ ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်။ ဘယ်တုန်းကလဲဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ (၁၆) ရက်နေ့ကပဲ။
ပိုင်နွန်။ ။ နောက် ဆရာတို့လုပ်ငန်းကို ဘယ်တော့စလုပ်သွားမှာလဲ၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက် ဘယ်လောက်အထိလဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ အခု ဒီဇင်ဘာ (၂၂) ရက်နေ့က စပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတွေ စတည်ဆောက်နေပြီ၊ ပထမဆုံးရေးတောင်ပိုင်းကို ပေးမယ်ဆို အနည်းဆုံး (၃) လလောက် တည်ဆောက်ရတယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့် မတ်လ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်မှာ မီးစပေးတော့မှာ။ စတင်စမ်းသပ်ပြီး ရွာတွေ စပေးမယ်။ကလော့ရွာကို အရင်လုပ်မယ်၊ ပြီးရင် ရေးချောင်းနဲ့ ကျောင်းရွာမှာ တစ်ခုလုပ်မယ်။ ကလော့တော့မှာကျ (၉) မီဂါဝပ်၊ ကျောင်းရွာမှာကျ (၂၈) မီဂါဝပ် ထုတ်လုပ်မှာ။
ပိုင်နွန်။ ။ မီတာခကိုရော ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားဖို့ရှိလဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ လျှပ်စစ်ကို ပေးတဲ့အခါကျရင် ဆရာတို့က FO လောင်စာ မီးထိုးဆီကို နိုင်ငံခြားက သွင်းရတဲ့အတွက် ဒေါ်လာဈေးအတက်အကျရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ဆရာတို့မီတာခကို ၂၅၀ ၂၆၀ အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမယ်၊ ဒေါ်လာဈေးနိုမ့်သွားတာနဲ့ မီတာခလည်း နိ်မ့်သွားမယ်၊ ဒါကြောင့် မီတာခ အပြောင်းအလဲမဖြစ်အောင် နောင်ဆို ရေအားလျှပ်စစ်ကို ထပ်လုပ်သွားမှာ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ရပြီးဆိုရင် မီတာခကို ၁၅၀ ကျပ် နဲ့မှန်းထားတယ်၊ အဲ့ကျ တည်ငြမ်သွားမယ် မပြောင်းတော့ဘူး။
ပိုင်နွန်။ ။ အခု ရေးမြို့မှာ ဦးကုလားကြီးမီးကို ယူထားတဲ့အိမ်တွေကိုက တကယ်လို့ ဆရာတို့မီးကိုလိုချင်လာရင် ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ ဆရာတို့က လောလောဆယ် ဦးကုလားကြီးက ရေးမြို့နယ်မှာ လျှပ်စစ်ကွန်ရပ် ဓာတ်အားလိုင်းကို ယူပြီး မီးပေးနေတယ်၊ ဒါကြောင့် ရေးမြို့ကို ဆရာတို့က မီးမပေးသေးဘူး၊ သူမပေးတဲ့နေရာ ရွာတွေမှာ လိုက်ပေးမယ်၊ နောက်သူမပေးနိုင်တဲ့ အအေးခန်းစက်ရုံတွေ အလုပ်ရုံတွေ ပေးဖို့လုပ်ထားတယ်။
ပိုင်နွန်။ ။ ဟုတ် ဆရာပြောတဲ့ရေအားလျှပ်စစ်ကို အသုံးပြုမယ်က ဘယ်တော့အသုံးပြုလုပ်မှာလဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ အခုကနေစပြီး တိုင်းတာနေပြီး ဒီဇိုင်းတွေထုတ်ရမယ်၊ နွေရာသီရော မိုးရာသီမှာပါ ရေအားတွေကို အသေအချာတိုင်းရတယ်၊ အချိန်လိုတဲ့အတွက် (၂၀၁၈) ကျရင် ကလော့ကိုစလုပ်မယ်။
ပိုင်နွန်။ ။ ရေးအားစတင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာ ကလော့ကျေးရွာအတွက် SEGEP ကုမ္ပဏီကနေ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လို့ရတဲ့အချိန်ကျရင် ကလော့ရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်၊ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုလဲဆိုရင် မီးသတ်တို့ ကျောင်းတို့ ဆေးရုံတို့ လုပ်ပေးဖို့တော့ လျာထားတာရှိတယ်။
ပိုင်နွန်။ ။ အခုဆရာတို့လုပ်ငန်းကို BOT စာချုပ်သက်တမ်းဘယ်လောက်လဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ ဆရာတို့က အစိုးရနဲ့ BOT (တည်ဆောက်၊ လည်ပတ်၊ လွှဲပြောင်း) ချုပ်ထားတာ အနှစ် (၃၀)၊ ပြည့်သွားရင်တော့ အစိုးရကို အပ်ပေးရပါမယ်။
ပိုင်နွန်။ ။ ဟုတ် ဆရာတို့ မီးပေးမဲ့အထဲမှာ ရေးမြို့မပါဘူးလို့သိရတယ်၊ ရွာပေါင်းဘယ်လောက် မီးပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလဲ?
မောင်မောင်မြင့်။ ။ အရေအတွက်ကျ ဆရာမမှတ်မိဘူး၊ ဆရာမှတ်မိတဲ့ရွာတွေဆိုရင် ရေးမြောက်ပိုင်းဆိုရင် နှစ်ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မော့ကနင်၊ ကော့ဒွတ်၊ လမိုင်း၊ သောင်ပြင်၊ တောင်ဘုံ၊ အာရုတောင်၊ အင်ဒင်၊ ဒူးယား၊ ပင်လယ်နားက ရွာတွေအထိ အားလုံးပါတယ်၊ ကိုရင်လေး၊ ကလော့တော့၊ ဟံဂံ၊ ကဗျာ၊ ရင်းဒိန်း၊ ရင်းရဲ၊ ခေါဇာ၊ မန်ကျီးအထိပါတယ်၊ ကျောင်းရွာအတွက်လည်း တောင်းထားတယ်၊ အခုကျောင်းရွာအတွက် စီမံချက်တွေပြန်ဆွဲနေတယ်၊ ကျောင်းရွာမရောက်ခင် ရွာတွေ အားလုံးပါတယ်။
ပိုင်နွန်-ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Previous သံလွင်တံတား (ချောင်းဆုံ) တည်ဆောက်မှု ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီ
Next ဓါတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းရန် ခုတ်လှဲမည့်ရာဘာပင်များအတွက် နစ်နာကြေးမရမည်ကိုစိုးရိမ်